के घरमै सकिन्छ कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न ?
Home /जीवनशैली, टिप्स एण्ड ट्रिक्स, स्वास्थ्य/के घरमै सकिन्छ कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न ?
जीवनशैली,टिप्स एण्ड ट्रिक्स,स्वास्थ्य |
कोरोना भाइरसको परीक्षण अस्पतालमा मात्र नभएर घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि बजारमा घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्ने किटहरू उपलब्ध छन् ।
ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै विश्वभरका विज्ञहरूले यसको प्रयोग र परिणामका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यूएस फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) भने बढ्दो ओमिक्रोन संक्रमणलाई लिए घरमा गरिएको परीक्षणले गलत नतिजा दिन सक्ने बताएको छ ।
घरमै कोरोना भाइरस परीक्षण के हो ?
कोरोना जाँच गर्न र्‍यापिड एन्टिजेन वा आरटी-पीसीआर वा यस्तै अन्य परीक्षण गर्नुपर्छ । यी सबै परीक्षणका लागि चिकित्सा विशेषज्ञ र प्रयोगशाला चाहिन्छ ।
घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्नु सजिलो विकल्प हो । यो गर्भावस्था परीक्षण किटजस्तै हो । त्यसमा नमूना राखेको १५ देखि २० मिनेटमा कोरोना पत्ता लाग्छ । यो टेस्ट किटमार्फत कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि प्रयोगशाला वा चिकित्सा विशेषज्ञको सहयोगबिना नै घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्न सक्छ ।
आरटी-पीसीआर परीक्षणभन्दा घरमै हुने परीक्षण कति फरक ?
रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन (आरटी-पीसीआर) परीक्षणलाई गोल्ड स्ट्यान्डर टेस्ट मानिन्छ । यसमा बिरामीको नाक वा घाँटीबाट नमूना लिइन्छ । यो परीक्षण ४-५ घण्टासम्म प्रयोगशालामा गरिन्छ ।
यसमा रिबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) को परीक्षण गरिन्छ, जुन भाइरसको आनुवंशिक सामग्री हो । नमूनाको आनुवंशिक अनुक्रम कोरोना भाइरसको आनुवंशिक अनुक्रमसँग मेल खाएमा बिरामीलाई कोभिड पोजिटिभ मानिन्छ ।
घरमै गरिने कोरोना परीक्षण द्रुत एन्टिजेन परीक्षण हो । यसमा नमूना निकाल्ने विधि आरटी–पीसीआर जस्तै भए पनि प्रयोगशालामा जसरी परीक्षण गरिँदैन । यो हाम्रो शरीर भाइरस छ कि छैन भनेर छिट्टै पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ । द्रुत एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसको सतहमा पाइने प्रोटिन र अणुहरू पत्ता लगाउँछ ।
विज्ञहरूका अनुसार दुवै परीक्षण कोरोना भाइरसको मूल स्ट्रेन पत्ता लगाउन प्रभावकारी छन् । यद्यपि, ओमिक्रोन भेरियन्ट घरमा गरिने परीक्षणमा नदेखिन सक्छ । परीक्षण किटले नतिजा नेगेटिभ दियो भने यसको पत्ता नलाग्न सक्छ ।
घरमै कोरोना परीक्षणको नतिजा कति सही हुन्छ ?
विज्ञहरू मान्छन् कि घरमा कोरोना परीक्षण गर्दा प्रायः सही परिणाम आउन सक्छ । केवल १५ मिनेटमा मानिसले आफू कोभिड पोजिटिभ छ कि छैन भन्ने थाहा पाउँछ । यद्यपि, यो आरटी-पीसीआर परीक्षणभन्दा यो बढी सही छैन ।
के घरमा कोरोना परीक्षण गर्दा ओमिक्रोन पत्ता लाग्छ ?
विश्वमा ओमिक्रोनको तीव्र फैलावटसँगै घरमै कोरोना परीक्षण गर्ने किटको खरिदमा पनि उछाल आएको छ । तर, र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्टले यो भेरियन्टको संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छ कि गर्दैन भन्ने बहसको विषय छ ।
एफडीएले भर्खरै यसको नतिजालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य एजेन्सीले घरमै भएको परीक्षणले कोरोनाका सबै प्रकार भेरियन्ट पत्ता लगाउन सकिने तर ओमिक्रोन पत्ता लगाउन गाह्रो भएको बताएको छन् ।
‘लकडाउन’ अघि प्राप्त मागपत्र कार्यान्वयन गर्न ६ महिना म्याद थप
TAGS: कोरोना खोप कोरोना परीक्षण कोरोना भाइरस